रेखाको आक्रोश: ' एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरित्र हत्या गरेर न्याय हुन्छ'
रुकुममा आफ्नी प्रेमिका लिन भनेर गएका नवराज विक र उनका साथीको गरिएको निर्मम हत्याको अनुसन्धान यतिबेला चलिरहेको छ। दलित भएर ठकुरी युवती संग प्रेम गरेकै कारण हत्या भएको बताईएको केसको यतिबेला अनुसन्धान भैरहेको छ। बाँकी नतिजा अनुसन्धान पछी थाह होला। तर यतिबेला सामाजिक संजालमा घटनामा जोडिएकी सुष्मा मल्ललाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी भैरहेका छन्। उनको चरित्र हत्या गर्ने खालका कमेन्टहरु समेत आईरहेका छन्।
अनेकन टिप्पणी आइरहेका बेलामा अभिनेत्री रेखा थापाले कसैको पनि चरित्र हत्या गर्ने आधिकार कसैलाई नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छिन्। उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा घटनाका दोषीलाई तुरुन्त कारवाहीको माग गर्दै बालिकाको चरित्र हत्या नगर्न लेखेकी छिन्।
रुकुम घटनाका दोसी माथि कर्वाही र पीडितलाई अबिलम्म्ब न्याय दियियोस । यस घटनामा जोडीएकी शुश्मा मल्लको बारेमा जसरी चरित्र हत्या गर्ने खालका र नारी अस्मिताको धज्जी उडाउने काम भएको छ, तेस्ले फेरिपनी उत्पीडित वर्ग माथि प्रहार भयो भन्ने लाग्छ । एउटा दलित सँग प्रेम गर्ने सहास भएकी बालिकाको चरित्र हत्या गरेर न्याय हुन्छ त? दोषिलाई कानुनी कार्वाही हुनु पहिले नै एउटा केटी मान्छेले आफ्नो सामाजिक र चारित्रिक सम्पत्ती बजारमा लीलाम गर्नु पर्ने ? नेपालमा केटी मान्छेको बेइज्यत गरेर न्याय पाउने हो र ? छानबिनको क्रममा रहेकी किशोरिको बारेमा अनर्गल कुरा लेख्ने छुट छ ? समुहमा बाहुन छेत्री, जनजाती जो जस्लाई गाली गर्नु छ गरे हुन्छ I एउटा केटी मान्छेको पेटिकोट समातेर बिद्रोह हुन्छ ? दोषी वा निर्दोषको किटान हुनु पहिले नै यसरी मानसिक हिन्सा र प्रताडना दिएको कारण ति किशोरि नदिमा हाम्फलेमा कस्ले जवाफ दिन्छ ? दलितलाई प्रेम गरेको सट्टा जसरी उस्को चरित्र हत्या हुँदैछ, यसले जातिबादी सोचलाई झन धेरै बालवालिकामा स्थापित गर्ने देखिन्छ । राज्य सँग लडनु पर्‍यो नि, एउटा १७ बर्ष कि किशोरिलाई मानसिक र सामाजिक उत्पिडन किन ? दोषी भये कानुनी कार्वाही गरियोस । यो नबिर्सौ कि एउटा किशोरिको जीवन बर्वाद पारेर न्याय पाउने हो भने, कुनै पनि छोरीले भोली कसैलाई माया गर्ने छैनन ।